Global Voices teny Malagasy » “Fotoana niadanan’ireo fanon-dranomasina” hoy ny ministera ao Trinidad & Tobago na teo aza ny fitomboan’ny fihazàna azy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Marsa 2021 16:50 GMT 1	 · Mpanoratra Cari-Bois News Nandika avylavitra
Sokajy: Karaiba, Trinite sy Tobago, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana, COVID-19
fanon-dranomasina ‘luth'; sary  an'i Alastair Rae tao amin'ny Flickr, CC BY-SA 2.0 .
Ny lahatsoratra niaingàna, nosoratan'i Nicole Vallie, dia nivoaka  voalohany tao amin'ny Cari-Bois News . Dika nokiraina no averina avoaka etoana ho ampahany amin'ny fifanarahana mifampizara votoaty nifanaovana tamin'ny Global Voices.
Vanim-potoana fanatodizan'ireo fanon-dranomasina ‘luth’ izao any Trinidad & Tobago, manomboka Febroary hatramin'ny Aogositra  isantaona, saingy taorian'ny nanakanana azy ireo tsy ho afaka manao fisafoana isanalina eny amin'ny torampasika mba hiarovana ireo fanon-dranomasina manatody dia mivonona hitolona ireo vondrona mpiaro ny fano. Maro amin'ireo vondrona no manantena hahazo fanomezandàlana manokana manoloana ny fepetra momba ny COVID-19 misy ao amin'ny firenena izay mandràra amin'izao fotoana izao ny olona rehetra tsy handeha eny amin'ny torapasika ivelan'ny amin'ny 6:00 maraina hatramin'ny 6:00 hariva.
Na izany aza, ireo vondrona toy ny Turtle Village Trust , Las Cuevas Eco-Friendly Association , Nature Seekers , izay samy ao amin'ny morontsiraka avaratr'i Trinidad avokoa, sy ny Environmental Research Institute Charlotteville , ao Tobago, dia samy manizingizina fa ilaina ho fiarovana ireo fanon-dranomasina ‘luth’ ny fanaovana fisafoana mavitrika, eny fa na ireo karazany hafa ihany koa aza. Ireo trangana fihazàna, hoy ry zareo, dia nitombo nandritra ny fotoam-panatodizana tamin'ny 2020, ary satria amin'ny alina ireo fano no manatody, tsy dia azo ianteherana loatra ny hoe ho kivy vokatr'ireo fepetra momba ny COVID-19 ireo mitady hanimba azy ireny.
Tao anatin'ny fanazavana momba ny halehiben'ny loza mitatao, nolazain'ny vondrona Turtle Village Trust fa ny tamberina voarain-dry zareo avy amin'ireo vondrompiarahamonina ao Manzanilla sy ny Fishing Pond any amin'ny morontsiraka atsinanan'i Trinidad, ary ny Las Cuevas, Blanchisuesse, Sans Souci, Grande Riviere sy Toco any avaratra, dia maneho fitomboana trangam-pihazàna. Ilay vondrona dia iray amin'ireo marobe mitaky ny hisian'ny fanomezandàlana manokana manoloana ireo fepetra nataon'ny ministeran'ny fahasalamàna [2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV)] (No. 4)  , izay milaza fa mitohy mikatona ho an'ny daholobe ny torapasika manomboka amin'ny 6:00 maraina hatramin'ny 6:00 hariva.
Tamin'ny 2020, ny Nature Seekers, amin'ny maha”-mpiaramiombona antoka tena ilaina azy amin'ny fiarovana,” dia nahazo alàlana hanangona angon-drakitra momba ireo morontsiraka ao Las Cuevas sy Matura, tafiditra tao anatin'ny tetikasa ifandrimbonana miaraka amin'ny Fisheries and Oceans Canada . Kanefa, noho ireo fepetra fanampiny momba ny fahasalamam-bahoaka napetraka nanomboka tamin'ny fiandohan'ny 2021, niantona ny anjara asany tao anatin'ilay tetikasa.
Tao anaty taratasy iray nalefa ho an'y minisitry ny fahasalamàna, ny 9 Martsa, nomarihan'ilay fikambanana tsy mikatsaka tombontsoa ara-bola Fishermen and Friends of the Sea  (Mpanjono sy Naman'ny Ranomasina) fa am-polontaona maro ireo vondrompiarahamonina manerana an'i Trinidad & Tobago no efa nirotsaka an-tsitrapo nanao fisafoana isanalina mba handresena lahatra ireo mpihaza. Notadiavin'ilay vondrona ihany koa izay hampahatsiahivana ny minisitra fa mazàna ireny vondrona ireny no ambany lavitry ny fetra 10 voasoratra ho an'ny famoriana olona, ary ny fitsidihan-dry zareo ny torapasika dia tena ilaina tokoa hisorohana ny famonoana ireo karazana izay efa saropady rahateo ara-tontolo iainana.
Nomarihan'ilay taratasy ihany koa fa tamin'ny Janoary 2021 ny Linisiteran'ny Drafitra sy Fampandrosoana, tonga saina amin'ireo tsy fanjariana tao anatin'ny fampiharana ny lalàna nanerana ny firenena, dia nametraka ny Vondron'asa nasiônaly momba ny fanon-dranomasina . Natambatr'io hetsika io ny governemanta sy ireo fikambanana sivily mba hanome hevitra momba ny fiarovana ny fanon-dranomasina.
Tao anaty fampitambaovao ho an'ny gazety, tamin'ny 10 Martsa, nasongadin'ny Environmental Management Authority (EMA) ihany koa ny lanjan'ny fisian'ny vondrompiarahamonina eny amorontsiraka, tao anatin'io dia nolazainy  fa nahomby tsara tamin'ny fampanalavirana ireo mpihaza ny “tetikady iraisana ahitana ireo mpisafo avy amin'ny vondrompiarahamonina, ireo mpitaridia, ny fisian'ireo mpikaroka ary ny daholobe nandritra ny vanimpotoana fanatodizana”.
Isantaona, misy dimy karazana ireo fanon-dranomasina tonga manatody any amin'ireo morontsiraka ao Trinidad & Tobago: ny ‘luth’, ny Hawksbill, Olive Ridley, Loggerhead ary ny Sokatra Maitso. Tamin'ny 2014, notombanan'ny EMA ho Environmentally Sensitive Species (ESS) (Karazany saropady ara-tontolo iainana) ireo dimy ireo, fanondroana  iray izay notohanan'ny fanaovana lalàna milaza fa 100.000 dolara Trinidad&Tobago ny sazy ho an'izay niteraka fahavoazana ho an'ireo fanon-dranomasina (manodidina ny 15.000 dolara amerikàna), miampy taona roa an-tranomaizina.
Miely amin'izao fotoana izao ny fanangonantsonia iray atao ety anaty tambajotra , izay maintso ny praiminisitra Keith Rowley hanome fahazoandàlana ho an'ireo mpisafo isanalina eny amin'ny torapasika. Tamin'ny fotoana namoahana ny lahatsoratra, efa ho 4.000 ireo sonia voaangona. Teo anelanelany, nentanin'ireo vondrona mpiaro mba hanao tatitra any amin'ny polisy, na ireo mpiambina ala, na ireo rantsan'ny polisy ao amin'ny EMA ireo olona mahita zavatra mampiahiahy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/03/12/151869/
 Febroary hatramin'ny Aogositra: https://lacccb2018.org/turtle-nesting#:~:text=Nesting%20season%20is%20usually%20between,and%20definitely%20some%20baby%20turtles.
 Turtle Village Trust: http://turtlevillagetrust.org/
 Las Cuevas Eco-Friendly Association: https://www.facebook.com/Las-cuevas-eco-friendly-association-302082766647810/
 Nature Seekers: https://www.facebook.com/NatureSeekers/
 Environmental Research Institute Charlotteville: https://www.eric-tobago.org/index.html
 [2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV)] (No. 4): https://www.covid19.gov.tt/the-public-health-2019-novel-coronavirus-2019-ncov-no-31-regulations-2020/
 Fisheries and Oceans Canada: https://www.dfo-mpo.gc.ca/index-eng.html
 Fishermen and Friends of the Sea: https://ffostt.com/
 Vondron'asa nasiônaly momba ny fanon-dranomasina: https://www.looptt.com/content/ministry-launches-national-sea-turtle-task-force
 fanangonantsonia iray atao ety anaty tambajotra: https://www.change.org/p/the-honourable-minister-of-health-terrence-deyalsingh-grant-permission-for-night-patrols-as-a-matter-of-urgency-in-order-protect-turtles-in-t-t?recruiter=129419620&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_abi&utm_medium=whatsapp&utm_content=washarecopy_27760030_en-GB%3A0&recruited_by_id=e32dceb0-22c8-4b4e-9240-984728a4fbcf